Himalaya Dainik » चिठी लेखेर पूर्व जर्नेलकी छोरीले संसार छाडेपछि…
पूर्व दुईतारे जर्नेल डा. पूर्ण सिलवालको घरलाई अहिले एउटा असह्य बेदनाले घेरेको छ । घर सुनसान थियो । बाथरुम गइरहने र भित्रै लामो समय टोलाउने उनको पुरानै आदत । तर, सोमबार दिउँसो १२ बजे जब बाथरुम छिरिन्, तब कहिल्यै यो धर्तिलाई जिउँदो आँखाले नियाल्न नसक्ने गरी बिदा भइन् । छेउमा अंग्रेजीमा लेखिएको एउटा चिर्कटो छाडिन् ।
लेखिएको थियो, ‘नोबडी इज टु बि ब्लेम्बड…’ अर्थात्, ‘यो घट नाप्रति कोही आरोपित छैनन् (स्वेच्छाले) ।’
जर्नेल डा. पूर्णकी २७ वर्षिया कान्छी छोरी नयोनिकाले य सप्रकार सोमबार धर्ति छाडिन् । सेन्ट मेरिजकी प्रोडक्ट र भारतमा स्नातकोत्तरको अध्ययन सिध्याएर स्वदेश फर्किएकी उनी कुनै काम वा पेशामा आव द्ध हुने रुची राख्दिन थिइन् । परिवारका सदस्यहरूले कुनै जागिर वा समय बिताउने माध्यमका रूपमा केही न केही काममा लगाउने प्रयास गरेको धेरै भयो ।
घरायसी मामिला होस् वा अन्य कुनै विषय होस्, न आफ्नो कुरा शेयर गर्थिन्, न अर्काका कुरामा प्रतिक्रिया जनाउँथिन्
तर, उनी ‘ह्या’ भन्दै पन्छिन्थिन् । घरायसी मामिला होस् वा अन्य कुनै विषय होस्, न आफ्नो कुरा शेयर गर्थिन्, न अर्काका कुरामा प्रतिक्रिया जनाउँथिन् । यस्तोखाले अन्तरमुखी स्वभावबाट मुक्त गराउन आमा जयन्तीले धेरै प्रयास गरिन् । तर, सकिनन् । बाहिरफेर आफू निस्कँदा सकेसम्म छोरीलाई लैजाने आमाको चाहना हुन्थ्यो ।
दुई वर्षअघि दिदीको विवाह भयो । यो वर्ष उनै बहिनीको पालो थियो । मंसिरतिर विवाह गर्ने सोचमा परिवार थियो । तर, नयोनिका न घरबाट निस्कन मान्ने, न विवाहका कुरै सुन्न चाहने ! अन्ततः अस्ती १२ गते दिउँसो घाँ टीमा सलको पा सो बेरेर प्राण त्यागिन् ।
बुबा डा. पूर्ण दुई वर्षअघि नेपाली सेनाको जर्नेलबाट अनिवार्य अवकास पाएर घर फर्किएका हुन् । तर, लामो समय सुरक्षा निकायमा सेवा गरेका कारण उनले अवकासपछि अध्ययन र अध्यापनका कामलाई अगाडि बढाए । यसकारण दिनको समय घरमा कमै बस्छन् ।
उनले विवाह गरेकी जयन्ती प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाकी बहिनी हुन्, अर्थात् डा. पूर्ण प्रधानसेनापतिका बहिनी ज्वाइँ र आ त्मह त्या गर्ने नयोनिका भाञ्जी हुन् ।